Kulungile, ekugcineni, ungabona ukuphela okulindelwe isikhathi eside kubusika obunzima kakhulu obubandayo! Ukuze ugqoke njalo ezindaweni ezifudumayo, kodwa ukufisa, khetha indlela ehlanzekile eya ehhovisi futhi ubonise phambi kosebenza nabo eqhweni elingcolile, zama ukubuka i-sexy futhi ugqoke ijazi nesembatho, phezu kwamabhujethi amaningana we-wool, futhi ube njengomuntu weqhwa.
Omunye angase athande lokhu, kodwa nakanjani akuyona i-Lady real. Sesivele silungiselela ukuhlaselwa okulinde isikhathi eside ezitolo zezimonyo ngalesi sikhathi: isizini esisha izimonyo ezintsha.
Le mali yonke into idinga ukuguqulwa entwasahlobo, ziqaphele ukuthi ungayinakekela kanjani isikhumba somuso entwasahlobo! Okokuqala, yiqiniso, i-moisturizer. Emakhazeni, sasebenzisa ukufana okunamandla okhilimu, okungamaphesenti angama-100 angavikela isikhumba emakhazeni nasebusweni. Manje, ukhilimu onjalo ungathunyelwa ku-esiqandisini - linda ubusika olandelayo. Ngokuqala kwentwasahlobo, sithanda ukukhanya kokukhanya kwesikhumba sobuso. Isikhumba esomile kuyoba kuhle ukuthenga ukhilimu nge-shea ibhotela noma amafutha omnqumo. Ukuze uthole okuxubile noma okuvamile, ukhilimu omncane ngokungeziwe kwe-hyaluronic acid noma i-glycerin kuyokwanela. Isikhumba se-oily siyokwaneliswa kokubili uketshezi noma i-gel - akudingi amafutha angaphezu kwamandla, izingxenye kuphela ezigcina umswakama kumaseli (izithelo ze-acids, izitshalo zokutshala).
Okwesibili, kufanele siqaphele ukuvikelwa emisebeni ye-ultraviolet. Ilanga alishisi kakhulu entwasahlobo, yebo, kodwa likhanya njalo. Imisebe enjalo nje, okuvela kuyo lapho nje sifuna ukufihla ubuso bethu ngokuthembeka. Ngokuvamile, i-smart Lady ikhetha isisekelo se-tonal noma ukhilimu wosuku nge-SPF factor. Lokhu kuyaqondakala - kungani ubeka ebusweni bakho ingqimba eyengeziwe yokwenza. Ungadluli isikhumba ngaphezulu. Ukhilimu onamafutha ngezinga lokuvikelwa okungenani amaphuzu angu-15 kuyafaneleka ngempela.
Ngendlela, kuze kube yilapho ilanga lingashisi njengentwasahlobo, sekuyisikhathi sokwenza isikhumba esijulile. Ukunakekela isikhumba sobuso entwasahlobo kuzoba nzima kakhulu. Kunezinketho eziningi. Kusukela ekuqothulweni kwekhaya kuya enkambisweni egcwele ye-salon.
With salon konke kucacile, lapho uzotshelwa indlela yokunakekela isikhumba ebusweni entwasahlobo. Izinketho ze-exfoliation zanele uhlobo lwesikhumba nanoma yikuphi ukunambitheka. I-Microdermabrasion izokulondoloza kumaseli afile, kanye nemibimbi emihle, i-glycolic noma ama-peels e-asidi afinyelela ezingxenyeni ezijulile zesikhumba, ahlanze, akhululwe kuphela ezingxenyeni ezingadingekile, kodwa ngisho nama-radicals amahhala. Ukuqhathaniswa kwe-Chemical kuyinto into eqinile kakhulu, eqinile. Le nqubo izosusa ebusweni yonke imidwebo yobunzima bebusika, futhi isikhumba sobuso entwasahlobo sizobe sihlanzekile futhi siphuthumayo. Kodwa ungakhathazeki, awuyikuba ikhophi kaSamantha Jones ku "Sex in the City". I-cosmetologist enhle ngeke ilimaze isikhumba. Futhi kubonakala sengathi uzoba neminyaka engu-5 encane!
Ukukhishwa kwekhaya ekhaya ngeke kulethe imiphumela ephawulekayo ngesikhathi esisodwa, kodwa uma wenza njalo, uzobe uyifinyelela, isikhumba sizobe sinobuhle futhi sibushelelezi, futhi ubuciko buzoshintsha kube ngcono. Isikhwama ngeke sibe mncane kusukela ekuvakashelweni okubizayo ku-beautician.
Uma isikhumba somile, ukuhlunga, ukukhipha imfucumfucu nokwehla kufanele kulahlwe - akumele ukalimaze ikhava ebucayi. Ukuhlanza isikhumba sobuso entwasahlobo, ekuseni nakusihlwa, gcoba ubuso nolophu oluphuzile. Uwasusa ngokucophelela amangqamuzana afile, futhi uzobuyisela ithoni esikhumbeni, alusise. Futhi i-lotion ye-exfoliation ithuthukisa ukujikeleza kwegazi, futhi ibuyisela umsebenzi weselula ngisho nasezingxenyeni zangaphakathi.
Ezinye izinhlobo zesikhumba - ezixutshwe, ezijwayelekile kanye namafutha - zihlanze ngokwengeziwe. Umehluko kuphela yesikhathi somthelela wesikhungo, kanye nobukhulu bokuxhumana komshini. Uma ukhetha ukucubungula, khona-ke ekhaya kumele usebenzise eyodwa esekelwe ezitsheni ze-izithelo - izoba mnene esikhumbeni futhi ngeke ingene ezinqabeni zayo ezijulile. Ama-glycolic namakhemikhali amakhemikhali ekhaya awafisi ukusebenzisa - le mikhiqizo ihloselwe ukusetshenziswa ngabachwepheshe, akunakwenzeka ukuqhuba lezo zinqubo ekhaya. Izihlahla kanye nama-exfoliants ahlukahlukene kufanele asetshenziswe okungenani kanye ngesonto, futhi isikhumba samafutha - amabili. Khetha lezo ezisekelwe kuma-polymers okufakelwayo - aphephile futhi angalimazi ikhava enempilo. Kukhona izihlahla zamagilebhisi noma ama-apricot kernels. Akulungele kuphela isikhumba samafutha, kodwa ukucindezela komshini kufanele kube okuncane kakhulu. Isikhumba se-oily sinamandla ngaphezu kwanoma yikuphi, kodwa kungalimaza.
Iqhwa elithozisayo ukuze isikhumba senkinga
Amafutha we-hydrophilic wokuwasha
Amadivaysi eDarsonval aphulukisa ngokuphelele isikhumba nezinwele
Indlela yokunakekela isikhumba samafutha
Ukuhlanza isikhumba soju
Botox injection, izeluleko odokotela
Cheesecake Mini nge chocolate
Ukugosa nge-pepper obomvu obomvu
Berry bilberry ekudleni komuntu
Ingabe izimonyo zokuhlobisa zilimaza isikhumba?
Siyakuhalalisela ngoFebruwari 14, 2017 kumfana wakho othandekayo, indoda nomyeni evesini futhi ulandele ngamagama akho - Ukwazisa okungcono kakhulu ngoSuku Luka-Valentine intombi yakho ethandekayo nomfazi - izithombe ezihlekisayo nama-sms
Imikhuba ewusizo futhi eyingozi yezingane
Indlela yokusinda ekuxosheni futhi uthole umsebenzi omusha
Indlela yokukhetha i-sofa enhle
Iyini inqubo ye-spa